မောင်စိုးချိန် – မြေနဲ့အတူ အဓွန့်ရှည်မည့်သူ | MoeMaKa Burmese News & Media
(နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် အယ်ဒီတာစာရေးဆရာ ဦးဝင်းတင်သို့ ဦးညွတ်ကဗျာ)
ဝက်ဝံ ကျားများ ကျားသစ်များ
အဆိပ် မေးရိုး ကြွက်သား
ခြေသည်း လက်သည်း ချွန်မြ နုတ်သီး
စစ်တပ် ၊ ပုလိပ်တပ်
တရားရုံး စစ်ခုံရုံး ထောင်
ယန္တရား အထပ်ထပ် တပ်ဆင်ထား။
ခမ်းနားတဲ့ အတွေးအခေါ် အဘိဓမ္မာ။
ဗမာပြည် ကောင်းကင် အမြင့်
တရဲရဲ တလွင့်လွင့် ပွင့်နေမှာ
မြေနဲ့ အတူ အဓွန့်ရှည်ကြာ။
အေပရယ် ၂၉၊ ၂၀၁၄
One Response to မောင်စိုးချိန် – မြေနဲ့အတူ အဓွန့်ရှည်မည့်သူ
Arkar on May 5, 2014 at 9:43 am
Bring Khin Nyunt to justice first. He will confess who gave him order to abuse their in the law of court. Then the whole military gang member who abused their can be brought to justice. For the sake of those who has had suffered and for the great Burma, whoever abused the power, current and then, must be brought to justice. No forgiveness must be given including their daughters and sons. For example, Than Shwe’s daughter wedding must be audited.